Akpụkpọ ụkwụ: Naanị okomoko 5 nke ụwa gụnyere ebe ntụrụndụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Akpụkpọ ụkwụ: Naanị okomoko 5 nke ụwa gụnyere ebe ntụrụndụ
Akụkọ Antigua & Barbuda • Akụkọ Bahamas Breaking • Akụkọ ọhụrụ Barbados • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Curacao • Akụkọ Grenada na -agbasa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ okomoko • News • Akụkọ Lucuc na -agbasa • Tourism • Ego njem | Atụmatụ njem • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Resorts na osimiri na-egosipụta ngwugwu okomoko 5-kpakpando zuru oke nke ụwa ebe ndị ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ ọmarịcha osimiri aja aja, nri Global Gourmet,, ezigbo ụlọ, mmanya na-egbu egbu na-akparaghị ókè, egwuregwu mmiri na-atọ ụtọ, na ndị ọzọ.
Mgbe Sandals Resorts na-ekwu na ọ bụ ihe niile, ọ pụtara ihe niile n'ụzọ ọ bụla a pụrụ ichetụ n'echiche yana n'ụzọ kpakpando 5.
Enweghị ebubo ọ bụla zoro ezo ma ọ bụ ihe ijuanya, na ahụmịhe ndị ọbịa dị oke mma ma na -eru karịa atụmanya.
Site na nkeji onye ọbịa na -esi n'ụgbọ elu rịdata, a na -elekọta ihe niile site na ọdụ ụgbọ elu na -enyefe ndụmọdụ - site na mmalite ezumike ruo oge ndị ọbịa bara n'ụgbọ elu ịlaghachi n'ụlọ.
Nke bụ eziokwu bụ na ihe ndị ọzọ a na-akpọ ihe niile na-agbakwụnye na ebubo-dị ka ụtụ isi gọọmentị, nnyefe ọdụ ụgbọ elu, mmanya na-egbu egbu, ọrụ nkwalite, iri nri ọpụrụiche, na tipping. Na -ekwu maka ịtụgharị, nke a bụ ndụmọdụ. Nke a agaghị eme na akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ, n'ihi na agụnyere ihe niile, yana enweghị ebubo zoro ezo na enweghị ihe ijuanya, ewezuga ihe ịtụnanya niile ha na-eme gụnyere-dị ka ezigbo kpakpando 5.
Akpụkpọ ụkwụ bụ naanị ụwa 5-kpakpando okomoko gụnyere ntụrụndụ ebe ọ na-agụnye ihe niile oge niile. Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na -enye ndị ọbịa mgbakwunye dị mma karịa ebe ntụrụndụ ọ bụla ọzọ na mbara ala. Dịka ọmụmaatụ, akpụkpọ ụkwụ gụnyere nhọrọ kachasị oke na egwuregwu mmiri - ọbụlagodi ndị nwere moto - ọ gụnyere ya niile, gụnyere ntuziaka. Naanị akpụkpọ ụkwụ gụnyere mmiri mmikpu mmiri kwa ụbọchị yana ngwa ndị na -egwu mmiri, ntuziaka ọkachamara, ụgbọ mmiri amaba mmiri Newton, na saịtị ọmarịcha mma nke Caribbean.
N'elu ala, akpụkpọ ụkwụ na-agụnye egwuregwu kachasị dị ka golf nwere ụgwọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'efu-gburugburu na-enweghị agba ọsọ. Ọ nweghị ihe ọzọ nwere ihe ọmụmụ golf nke Greg Norman mere.
Kedu otu ụlọ ọ dị
Banyere ebe obibi, ọ nweghị ihe ọkọlọtọ gbasara oke ụlọ akpụkpọ ụkwụ, na-enye ọtụtụ oke elu dị ka Skypool Suites, Swim-Up Suites, Millionaire Suites, Rondoval Suites na gburugburu, Villa-Over-the-Water Villas, na Bungalows dị n'elu mmiri. Naanị akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ gụnyere ndị na -a butụ mmanya n'ime ụlọ ịhụnanya Butler Suites.
A na -etinye mmanya na -egbu egbu oge niile - ọ dịghị mkpa ichere maka otu oge obi ụtọ n'otu ụbọchị. Enwere ụlọ mmanya 11 n'ụlọ ezumike ọ bụla na -enweghị taabụ na enweghị oke. Na akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ, ndị ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ mmanya Robert Mondavi Twin Oaks.
Nri pụrụ iche na akpụkpọ ụkwụ bụ ọfụma. Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na-agụnye nri anaghị eri anụ nke kpakpando 5 nke ụwa niile ruo ụlọ oriri na ọtyụ 16ụ XNUMX pụrụ iche n'otu ebe. Ụlọ oriri na ọ Eachụ featuresụ ọ bụla nwere onye isi nri ụwa na-eji ihe eji arụ ọrụ ugbo na tebụl.
Ihe ngwugwu ezumike niile nke akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ nwere gụnyere:
Rie + INKụọ ihe ọINKụ .ụ
Nri iri nri kpakpando 5 dị ihe ruru 16 ụlọ oriri na ọṅụṅụ kwa ntụrụndụ
Nri ụtụtụ, nri ehihie, nri abalị na nri ọ bụla
Unlimited mmanya na -egbu egbu
Ihe ruru ụlọ mmanya 11 n'otu ebe
Akpakọbara akpa n'ime ụlọ ọ bụla
Robert Mondavi Twin Oaks na -akparaghị ókè® mmanya
PADI-Asambodo ndakpu ala mmiri (na akụrụngwa niile)
Njem nlegharị anya (yana akụrụngwa niile)
Nwamba Hobie, bọọdụ ụgbọ mmiri, kayak
Ntụziaka ọkachamara maka egwuregwu mmiri
Private agwaetiti ndị dịpụrụ adịpụ na akpụkpọ ụkwụ Royal Caribbean na akpụkpọ ụkwụ Royal Bahamian
Feesgwọ Green na ụlọ ahịa anyị golf ọmụmụ na ebe ntụrụndụ ahọpụtara
Volleyball osimiri, basketball, tebụl ọdọ mmiri
Tenis ehihie na abalị
Ime ụlọ nlekọta jiri ngwa ọgbara ọhụrụ
Ụbọchị na abalị ntụrụndụ gụnyere ihe ngosi ndụ
Motori egwuregwu mmiri na ebe ntụrụndụ ahọpụtara
nanị Ikike Mgbanwe n'etiti ntụrụndụ
Ndụmọdụ niile, ụtụ isi na onyinye
Nyefe ọdụ ụgbọ elu Roundtrip
Ebe ezumike ọdụ ụgbọ elu pụrụ iche na Jamaica na Saint Lucia
Ebe ntụrụndụ akpụkpọ ụkwụ niile bụ naanị ndị okenye, emebere maka ndị hụrụ n'anya
WiFi efu (n'ime ụlọ na mpaghara niile)
Agbamakwụkwọ n'efu (maka ịnọ abalị 3 ma ọ bụ karịa)
Personal Ọrụ Butler na nnyefe nkeonwe n'ọtụtụ ụlọ oke ọkwa